Home Wararka Fahad Yasin oo dhagaysan jiray teleefanada Kheyre, lana socon jiray dhaq-dhaqaaqiisa
Fahad Yasin oo dhagaysan jiray teleefanada Kheyre, lana socon jiray dhaq-dhaqaaqiisa
Fahad Yasin oo adeegsanayo qalab casri ah oo ay ugu deeqeen wadamo shisheeye, iyo shaqsiyaad la shaqeeya Xasan Kheyre oo uu Kheyre kalsooni buuxda ku qabay, ayaa waxa lagu xiray dhamaan xafiiskiisa, gurigiisa, iyo gawaaridiisa qalabka aan la dareemi karin ee la iska dhagaysto. Meelaha qaar waxaa la galiyay kaamirooyin codaka iyo muqaalka duuba oo ay adagtahay in la arko ama la dareemo.
Fahad Yasin ayaa si buuxda u heli jiray xogta, qorshaha iyo damaca ku jiray Xasan Kheyre. Farmaajo ayaa mararka qaar waxa loo sameeyn jiray waxa la yiraahdo “real time” dhagaysi ah, oo aan u baahnaynin in uu dhagaysto war la duubo.
Farmaajo oo dhowr mar ka xanaaqay hadalo ka soo yeeray Xasan Kheyre markii uu dhagaystay wararka laga soo duubay Xasan Kheyre ayaa waxa lagula taliyay in uusan marbana u muujin Kheyre in uu la socdo qorshaha Kheyre isla markaana uu noqdo qof aan maqlin hadalka sirta ee looga duubay Kheyre.
Dhanka kale Kheyre oo aan lahaynin dhaqan siyaasi iyo caqli uu ku kala saaro xaqiiqda, ayaa waxaa uu ku qanacsanaa in uu shacabka u faano, lacago shacabku leeyahay uu si shaqsi ah ugu tagri falo, sarana u qaado dhaqankiisa istus-tuska ah, isaga oo aan marnaba waqti-galin waxa ka socday xafiiskiisa.
Farmaajo iyo Fahad ayaa ka fogaaday wax kastaa ee keeni karay in Xasan Kheyre galo tuhun ah in lagu dabajiro, Kheyrana marnaba kuma fakarin in saaxiibiisa gaarka ah iyo shaqaalaha isaga u shaqeeya ee uu kalsoonida siiyay ay u shaqeeyaan Fahad Yasin xantiisana ay lsi joogta ula wadaagaa Farmaajo.
Farmaajo oo si joogta ula socday, dadka iyo wadamada uu Kheyre la hadli jiray, ayaa markii Kheyre la ceyriyay, waxaa durbadiiba xafiiska Kheyre lagu wareejiyay will uu adeer u yahay Farmaajo kaas oo looga dhigay Xog’hayaha Joogtada ee xafiiska Ra’iisal Wasaaraha. Waxaa si toos ah loo abaaray galalkii u gaarka ahaa Xasan Kheyre, (oo uu Farmaajo cod ahaan horay ugu dhagaystay) kuwaas oo lagu tuhmayo in ay ku jiraan heshiisyo gaar ah iyo dano ka tarjumayo wadamo kale kuwaas oo laga qariyay golaha wasiiradiisa..
Waxaan shaki ku jriin in Farmaajo iyo Fahad ay dacwad ku soo oogi doonaan Xasan Kheyre iyo shaqsiyaadka laga duubay hadalka ee ka tirsanaa golahiisa wasiirada iyo laba aqal ee baarlamaanka. Wali lama oga Fahad yaa kale ee uu ku maqan yahay?